I-Spin Drives yakho yokuHlola kunye nokungathembeki | Martech Zone
I-Spin Drives yakho yokuHlola kunye nokungathembani
NgoLwesine, Septemba 6, 2012 Douglas Karr
Ndineminyaka engama-44 ngoku kwaye ndihlala ndikhumbula abazali bam notatomkhulu besithi bebengasoze balubone unyulo olubi… ngolonyulo ngalunye. Andiqinisekanga ukuba unyulo luya luba mbi, ndicinga ukuba kungenzeka ukuba sikhula somelele kwiinkolelo zethu kwaye asivumeli isilayidi esininzi. Ndizifumana ndiphanda ukuba zeziphi iingxelo zezopolitiko ngakumbi kunakuqala, kwaye ndiyamangaliswa bubungakanani bokujikeleza.
Iminyaka engamashumi amabini eyadlulayo, khange ndikwazi ukukhangela kwi-YouTube kwaye ndibone isicatshulwa sokwenyani okanye i-flip kwi-Wikipedia ukubona iinkcukacha ze-spin. Namhlanje, ndiyenza kwi-iPad yam ngelixa ndihleli esofeni ndibukele ezopolitiko. Ndiyenza kuba ukujikeleza kwabo kwakha ukukrokra kwam. Ukuba ndibathembile, andiqinisekanga ukuba ndiza kubajonga ngexesha langempela. Imigaqo efanayo iyasebenza kwishishini lakho, kwimveliso okanye kwinkonzo.
Umcimbi ophambili kukuba abezopolitiko bethu bazama ukubamba uphawu ukugqibelela leyo yayiqhelekile kumashumi eminyaka eyadlulayo kwaye inokubanjwa kumajelo eendaba. Kulo mjikelo weendaba weyure ezingama-24 kunye nokurekhoda kwevidiyo koosopolitiki phantse yonke imizuzu yomhla, uphawu alubeki thuba. Isiphumo kukuba yonke into engafanelekanga ibhengezwa kwiindawo ezichasayo nakwizikhululo ezifikelela kuzo zonke iimbombo zomhlaba. Akumangalisi, ngokweGallop, ukuba kuphela yi-1 kwabali-10 baseMelika abavumayo yokusebenza kwenkongolo.
Ingxaki kukuba abantu bayasilela kwaye abafezekanga. Ke ngelixa ukuthengisa kwezopolitiko kuyanda, ukujongwa nokungathembeki kwabo bapolitiki kunyuka ngezinga elikhulu. Amagama ezopolitiko kunye nentengiso ziphantse zitshintshe. Amaphulo ezopolitiko ahlalutya abaphulaphuli, apolishe amagama, indawo ekujoliswe kuyo kunye nezoqoqosho. Kuvakala ngathi bathengisi.
Kukho isifundo kubathengisi ekujongeni nasekungamkeleni abezopolitiko. Okukhona usandisa ukwanda kokujikeleza kweemveliso kunye neenkonzo zakho, kokukhona kuya kufuneka ungapheleli nje ekuzameni igama lakho… uza kulitshabalalisa. Okukhona usebenzisa intengiso, kokukhona ukungathembi kunye nokuqwalaselwa ngakumbi kuya kusetyenziswa. Nokuba nabaxumi bethu, ndihlala ndizigcina kulindelo lwam. Ukuphosa injongo kunokuxolelwa ngumthengi wakho. Ukuxoka malunga nenjongo akunakuze.
Iphepha lePhepha lokuHlola eliVavanywayo
Iinkcukacha-manani zeTrafikhi yeWebhu